Kumutungamiriri; mutinhimira unonzi, “Maruva.” Rwiyo rwevanakomana vaKora.+ Maskiri.* Rwiyo rwerudo. 45 Pane chimwe chinhu chakanaka chiri kuita kuti mwoyo wangu ufashaire. Ndinoti: “Rwiyo rwangu rune* chekuita namambo.”+ Rurimi rwangu ngaruve chinyoreso+ chemunyori ane unyanzvi.+ 2 Wakanaka kupfuura vamwe vanakomana vevanhu. Mashoko enyasha anoyerera achibva pamiromo yako.+ Ndokusaka Mwari akakukomborera nekusingaperi.+ 3 Sungira bakatwa+ rako parutivi pako, haiwa iwe ane simba,+Mukukudzwa kwako nekubwinya kwako.+ 4 Uye mukubwinya kwako enda ukunde;*+Tasva bhiza rako uchitsigira chokwadi uye kuzvininipisa nekururama,+Uye ruoko rwako rwerudyi ruchaita* zvinhu zvinoshamisa. 5 Miseve yako yakapinza inoita kuti marudzi awire pamberi pako;+Inobaya vavengi vamambo nechepamwoyo.+ 6 Mwari ndiye chigaro chako cheumambo nariini nariini;+Tsvimbo yeumambo hwako itsvimbo yekururama.+ 7 Wakada kururama+ uye wakavenga uipi.+ Ndokusaka Mwari, iye Mwari wako, akakuzodza+ nemafuta ekupembera nemufaro+ kupfuura vamwe vako. 8 Zvipfeko zvako zvese zvinonhuhwirira mura nearosi* nekasiya;Unonakidzwa nezviridzwa zvine tambo uri mumuzinda wamambo wenyanga dzenzou. 9 Vanasikana vemadzimambo vari pakati pevakadzi vaunokudza. Mambokadzi amira kuruoko rwako rwerudyi, akashongedzwa negoridhe rekuOfiri.+ 10 Inzwa, haiwa iwe mwanasikana, teerera, uye rereka nzeve yako;Kanganwa vanhu vako neimba yababa vako. 11 Uye mambo achasuwa runako rwako,Nekuti ndiye ishe wako,Saka mukotamire. 12 Mwanasikana weTire achauya nechipo;Vanhu vakapfuma chaizvo vachatsvaga kufarirwa newe. 13 Mukati memuzinda wamambo,* mwanasikana wamambo ari kuyevedza zvinoshamisa;Zvipfeko zvake zvakashongedzwa negoridhe. 14 Achaunzwa kuna mambo akapfeka zvipfeko zvakarukwa zvemhando yepamusoro. Mhandara dziri kumuperekedza dzinopindwa nadzo mukati, pamberi pako. 15 Vachaunzwa nekupembera nemufaro;Vachapinda mumuzinda wamambo. 16 Vanakomana vako vachatora nzvimbo yemadzitateguru ako. Uchavagadza kuti vave machinda munyika yese.+ 17 Ndichaita kuti zita rako rizivikanwe kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ Ndokusaka marudzi achakurumbidza nariini nariini.
^ ChiHeb., “Mabasa angu ane.”
^ Kana kuti “ubudirire.”
^ ChiHeb., “ruchakudzidzisa.”
^ Uyu muti unobudisa namo nemafuta zvaishandiswa pakugadzira zvinhu zvinonhuhwirira.
^ ChiHeb., “Mukati.”